एप्पलले अमेजन स्टुडियोबाट तीनजना अधिकारीहरू राख्छ म म्याकबाट हुँ
रुबेन गेलार्डो | | धेरै
बोतलमा क्लियरर: एप्पलले उद्योगको पाईको टुक्रा पाउनको लागि आफ्नै सामग्री बनाउने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरू मुनि अडियोभिजुअल सामग्रीहरू एक राम्रो क्षणमा छन्। यसैले यदि तपाईं विविध र गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने, यो निश्चित छ कि प्रयोगकर्ताले सदस्यतासँग प्रतिक्रिया दिनेछ.
एप्पलले अन्य कम्पनीहरूबाट फरक साइनि testingहरू परीक्षण गर्दैछ। र अमेजन पोर्टल द्वारा प्रकाशमा ल्याएको पछिल्लो चुहावट मा खराब भाग लिन्छ विविधता। वेबसाइटका अनुसार एप्पल तीन नयाँ अमेजन स्टूडियो अधिकारीहरु मा हस्ताक्षर गरे हुने थियो Cupertino प्लेटफर्ममा काम गर्न।
ती मध्ये पहिलो तारा सोरेन्सेन हो। अमेजन स्टूडियोमा म बच्चाहरूको प्रोग्रामिंगको जिम्मामा थिएँ, एक दर्शक जुन यी प्लेटफार्महरूमा सामान्य रूपमा कुञ्जी हुन्छ र यदि यदि आमा बुबाले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ विविधता छ र सबै कुराको ख्याल राखिएको छ भने, तिनीहरू भाँडामा लिने कारण हुन सक्छन्। सोरेन्सेन एप्पलमा समान कार्यको लागि जिम्मेवार हुनेछन्: घरको सब भन्दा सानो सार्वजनिक।
दोस्रो, क्यारिना वाकरले हस्ताक्षर गर्यो, जो इन्चार्ज थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेजनको विस्तार। यस अवस्थामा उनी मोर्गन वान्डेल टोलीमा सम्मिलित हुनेछन - पूर्व अमेजोन पनि - र सँगै मिलेर तिनीहरूले एप्पल प्लेटफर्मको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नेछन्।
तेस्रो हामीसँग तारा पिएत्री छ, अमेजनमा व्यापारका पूर्व प्रमुख। एप्पलमा तपाईंको भूमिका उस्तै हुनेछ Cupertino कानूनी मामिला विभाग को नेतृत्व। तसर्थ, तीन नयाँ साइनि thatहरू जुन अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको शीर्ष कार्यकारीहरूको पहिले नै लामो सूचीमा थप्दछ।
प्रतिस्पर्धाले उनलाई सेक्टरमा अनुभवको लामो यात्रा गरिसकेको छ र जहाँ अधिक र अधिक आफ्नो सामग्री सामान्यतया कम्पनीहरूले सिर्जना गर्दछ। नेटफ्लिक्स सब भन्दा राम्रो उदाहरण हो, किनकि हरेक बर्ष बढ्दो बजेटको साथ यसले आफ्नै सिर्जनामा ​​बाजी दिन्छ। भविष्यको प्लेटफर्ममा तपाईले के हेर्नको लागि आशा गर्नुहुन्छ? स्ट्रिमिङ एप्पलबाट?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » एप्पलले अमेजन स्टुडियोबाट तीन अधिक कार्यकारीलाई राख्छ
सीमित समयको लागि प्रस्तावमा, Unibox साथ तपाईंको ईमेलहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्